Blue Screen Error ဖြေရှင်းနည်း (၂) - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Windows ဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ Blue Screen Error ဖြေရှင်းနည်း (၂)
Aung Ko Htet at 5:30:00 PM Windows ဆိုင်ရာ, နည်းလမ်းများ,
ဒီနည်းကတော့ Blue screen ဖြေရှင်းနည်းတွေထဲက နောက်တစ်နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Blue screen တက်တက်လာလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်မယ်ထင်လို့ပါ။ Window XP, Vista &7တွေအတွက် အကုန်အသုံးပြုလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ပြီးလို့ အဆင်ပြေသွားလို့ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ အဆင်မပြေတာများ ရှိခဲ့ရင်တော့ ကျတော့်ရဲ့ အားနည်းချက်ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အခု ကျတော်က Windows Vista နဲ့ လုပ်နည်းလေး တင်ပြပေးပါ့မယ်။ အောက်မှာ ဆက်လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။
1. Start menu >> Computer ကို Right Click ထောက်ပီး Properties ကို ၀င်လိုက်ပါ။
2. ကျလာတဲ့ Box ရဲ့ ဘယ်ဘက်နားလေးက advanced system setting ကို ၀င်လိုက်ပါ။
3. System Properties >> Advanced ထဲမှ အနီဝိုင်းပြထားတဲ့ Setting ကို ၀င်လိုက်ပါ။
4. System and Recovery ထဲမှ အနီရောင် ၀ိုင်းပြထားတဲ့ အောက်မှာရှိတဲ့ Automatically restart ကို အမှန်ခြစ်လေး ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါ။ (ပုံမှာကြည့်ပါ)။ ပီးရင် OK ပေးလိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ ပုံမှန်တက်လာနေကျ Bluescreen ဆိုတာကြီး မတက်လာတော့ပါဘူး။ အားလုံး အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်….:)။
မူရင်း >>>> FIRSTSTEP
ကျွန်တော်လေ့လာရင်းနဲ့တွေ့လို့ပြန် share ပေးလိုက်တာပါ။
kokogyi August 5, 2013 at 2:36 PM
အစ်ကိုရေ ကျနော့်စက်က blue screen error တော့မပာုတ်ဘူးဗျာ ဒါပေမဲ့ samsung usb driver ကိုဒေါင်းပြီး install လုပ်ပြီး restart ချ လိုက်တယ်အစ်ကို window ကပြန်တက်လာပြီး အမဲရောင်ပဲ ပေါ်နေတယ်အစ်ကို ဘာမှလုပ်လို့မရလို့ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲပြောပေးပါ ဗျာ ကျေးဇူးပဲအစ်ကို
kokogyi August 5, 2013 at 2:38 PM